Nauru Airline New Generation Boeing 737-700 | Airlines
Location: Bogga ugu weyn » Soo dirida » Airlines » Nauru Airline Jiilka Cusub Boeing 737-700
Diyaaradda qaranka ee Nauru ayaa daaha ka rogtay nashqad cusub oo beeraley ah oo uu dhiiri galiyay calanka Jamhuuriyadda, iyadoo ku soo dhaweysay diyaaradii ugu horeysay ee Jiilka Cusub ee Boeing ee duulimaadkeeda.
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Nauru, Mudane Lionel Aingimea, ayaa ka dooday naqshadda cusub ee Livey ee Townsville, oo daaha ka qaaday xiddigta 12-geesoodka ah ee Nauru ee ka soo jeeda qabiiladeeda iyo dadkeeda, iyadoo midabada qaranka ay ku fidsan yihiin jirka diyaaradda iyo baalasha.
Madaxweyne Aingimea waxa uu sheegay in uu aad ugu faraxsan yahay naqshadda kibirka leh ee beeralayda Nauruan.
Guddoomiyaha Shirkadda Diyaaradaha ee Nauru Dr. Kieren Keke ayaa sheegay in ay sharaf weyn tahay in Madaxweynaha Nauru uu helo diyaaradii ugu dambeysay ee Diyaaradda si ay u dhamaystirto markabka Pacific-ga ee VH-INU, Boeing 737-700.
Duulimaadka ugu horreeya waxa uu noqon doonaa daqiiqad dabaal-deg ah maadaama ay astaan ​​u tahay bilow cusub iyadoo shirkadda Nauru Airlines summadeeda cusub ay cirka u gashay diyaaradeena cusub,” Dr. Keke ayaa yidhi.
Dr. Keke waxa uu sheegay in dhammaan kooxuhu ay dhawaan ku ciyaari doonaan midabada Nauru iyo xiddiga qaranka.
"Mowjadaha ku qulqulaya jirka diyaaradda ayaa astaan ​​u ah Badweynta Baasifigga waxayna ka tarjumaysaa awoodda taariikhiga ah ee Nauru Airline ee ay ku doonayso inay ku xirto jasiiradaha yar yar ee Pacific-ga iyo Australia iyo meelo ka baxsan."
"Diyaaradaha 737-700 waxay sidoo kale ballaarinayaan awoodaha shaqo ee adeegeena, furitaanka fursadaha lagu kordhinayo shabakadaha meelaha aan aadno, taas oo la tixgelin doono mustaqbalka."
Iyadoo xarunteedu tahay Nauru, Nauru Airline hawlaheeda waxay saldhig u ahayd Brisbane muddo 20 sano ah iyadoo bixinaysa adeegyada hawada ee isku xidha Nauru iyo Bartamaha Baasifigga iyo Australia.
Hawlgalladani waa ay sii socdeen in kasta oo masiibada dhacday iyo Nauru Airline waxay rajaynaysaa inay ku fidiso adeegyada gobolka oo dhan.
Nauru waa jasiirad yar oo madax banaan oo ku taal Micronesia, waqooyi bari ee Australia. Waxay leedahay xeebo shacaab ah iyo xeebo ciid-cad oo timireed leh, oo ay ku jiraan Anibare Bay oo ku taal xeebta bari. Gudaha dhulka, dhirta kulaylaha ah waxay ku hareeraysan yihiin Buada Lagoon. Meesha dhagaxa leh ee Command Ridge, meesha ugu sarraysa ee jasiiradda, waxay leedahay meel ka baxsan Japan oo daxalaysan oo ka timid WWII. Harada biyaha nadiifka ah ee dhulka hoostiisa ee Moqua Well waxay dhex taal dhagaxa nuuradda ee Moqua Caves. Caasimada jamhuuriyada Nauru waa Yaren.
Xornimadii ka dib 1968, Nauru waxay ku biirtay Barwaaqa Sooranka ee Qaramada Midoobay oo ah Xubin Gaar ah; waxa ay noqotay xubin buuxda 1999. Dalka waxa la galiyay Bangiga Horumarinta Eeshiya 1991 iyo Qaramada Midoobay 1999kii.
Nauru waa xubin ka mid ah Barnaamijka Deegaanka Gobolka Koonfurta Baasifigga, Guddiga Koonfurta Baasifigga, iyo Guddiga Geoscience ee Koonfurta Baasifigga.
Bishii Febraayo 2021, Nauru waxay ku dhawaaqday inay si rasmi ah uga baxayso Madasha Jasiiradaha Baasifiga iyadoo bayaan wadajir ah ay la sameeyeen Jasiiradaha Marshall Islands, Kiribati, iyo Dawladaha Federaalka ee Micronesia ka dib muran ku saabsan doorashada Henry Puna oo ah xoghayaha guud ee Madasha.
Dayuurad Airline tahay Asia Bangiga Horumarinta Aasiya Australia Bank Beach Boeing Boeing 737 diyaaradda Boeing brand Brisbane Cave Coral Design Eos Mudane Hall Hoteelka Island Japan Kiribati Ocean Badweynta Baasifiga Port Reef Science UN Qaramada Midoobay War
Itoobiya waxay iskaashi la leedahay Air Djibouti & IDIPO gaadiidka cusub ee badda
Dumarku waa darawalada cusub ee la aqoonsan yahay ee Skal International